Nchịkọta UTM: kedu ihe ha bụ, njirimara na uru ọ bara | Network Meteorology
Mgbe anyị lere map nhazi, anyị ga-ahụ na enwere sistemu iji tinye nhazi ndị a. Ọ bụ usoro dabere na ntaneti eserese na mpaghara ya dị mita na oke osimiri. Ndi oku Nchịkọta UTM. Nke a bụ ntọala nke usoro nrụtụ aka. N’asụsụ Bekee, acronyms ndị a pụtara Universal Transversal Mercator. O nwere ojiji na njirimara dị iche iche anyị ga-ahụ n’isiokwu a.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere nhazi UTM, njirimara ha na uru ha bara, nke a bụ ọkwa gị.
2 Nchịkọta UTM na mpaghara
3 Ntughari nke nhazi UTM
Mgbe anyị na-ekwu maka sistemụ njikwa UTM anyị na-atụ aka na sistemụ dabere na ntaneti eserese eserese nke mpaghara ya dị mita na oke osimiri. N'etiti njirimara bụ isi anyị na-ahụ na ọ bụ ntanye cylindrical. Nke a pụtara na a na-eme atụmatụ ya n'akụkụ ụwa niile na mbara igwe. Ọ bụkwa transverse ntule. Ngwunye nke cylinder ahụ dabara na akụkụ ụwa. N'ihi ya, a na-echekwa uru nke akụkụ ahụ iji guzobe nkenke ka mma mgbe ị na-atụle ọnọdụ na ebe dị anya.
Uru dị iche iche nke sistemu a karịa ndị ọzọ bụ ihe ndị a:
Ihe ndị yiri ya na ndị meridian na-anọchi anya ahịrị ndị mejupụtara okporo. N'ụzọ dị otú a, a na-emezu nkenke karịa mgbe ịgbakọ ebe dị anya ma ọ bụ ịhụ ebe otu isi ihe dị na map dị.
Ogologo dị mfe karịa karịa usoro nhazi ọzọ.
A na-echekwa ọdịdị nke ọdịdị ala maka obere mpaghara. Nke a bụ otu anyị ga - esi mata enyemaka na ụdị ala dị na mpaghara.
Ntuziaka na ntụziaka dị mfe akara. N'ihi nhazi ndị a, mmadụ nwere ike ịmepụta ụzọ dị iche iche, ma oke osimiri ma ikuku.
Mana dịka ị nwere ike ịtụ anya, sistemụ niile nwere ụfọdụ ọghọm. Ka anyị hụ ihe ọghọm dị iche iche nke nhazi UTM:
Ebe dị anya na-abawanye ka anyị na-esi na njedebe nke njedebe nke gburugburu na cylinder. Ebe a dị anya dị na ntụziaka ahụ n'akụkụ cylinder.
Ọzụzụ dị otú a dị mkpa karịa na latitude. Ya mere, anyị na-ahụ na ndenye ọgwụ ahụ na-ebelata ka anyị na-aga ugwu dị elu.
Na latitude dị iche iche ọ bụghị na oke akara dị n'etiti elu.
Anaghị etinye mpaghara mpaghara polar. Buru n'uche na ebe ndị a dịkwa mkpa maka ebe dị iche iche
Nchịkọta UTM na mpaghara
Iji dozie nsogbu niile nke nrụrụ nke ntaneti nke maapụ UTM, a na-ewebata spindle iji kewaa elu ụwa. E kewara elu ahụ dum na spindles 60 ma ọ bụ mpaghara nke ogo 6 n'ogologo, na-ebute atụmatụ nha anya 60 na nke ha bụ isi meridian. Anyị na-anwa ịkewa ọ bụla dị ka a ga - asị na ọ bụ akụkụ nke oroma.
Iji guzobe nkewa ka mma nke spindles, ha dị 1 ruo 60 malite na Greenwich meridian nke ọwụwa anyanwụ. E kewara onye ọ bụla n’ime ha n’ebe dị iche iche nke akwụkwọ ozi aha ya na-akpọ ya. Soro ntuziaka site na ndịda site na ndịda wee malite na leta C wee kwụsị na leta X. Ka ị ghara inwe mgbagwoju anya enweghị ụdaume na akwụkwọ ozi m nwere ike ịgbagwoju anya na nọmba.
Egosiputara mpaghara obula UTM nke oma gosiputara nke oma na onu ogugu na mpaghara mpaghara. Mpaghara a nwere mpaghara akụkụ anọ yana kilomita 100 n’otu akụkụ. Ofkpụrụ nke nhazi ndị a na-adị mma mgbe niile ka ọ ghara iduhie ndị na-agụ ya. Axes Cartesian X na Y guzobere na spindle, X axis bụ equator na Y axis meridian.
Anyị ga-etinye ihe atụ nke nhazi UTM nke ebe Council of City nke A Coruña. Ọ bụ 29T 548929 4801142, ebe 29 na-egosi mpaghara UTM, T band UTM, nọmba mbụ (548929) bụ ebe dị anya na mita na East na nọmba nke abụọ (4801142) bụ ogologo na mita na North. A na-eji usoro nhazi usoro ala a mee ihe n'ebe niile iji zoo aka n'akụkụ ọ bụla n'elu ụwa. Nke a bụ otu ị ga - esi chọta ebe ụwa ọ bụla. Ekele maka usoro nhazi a enwere ike itinye ụkpụrụ na mmemme kọmputa dị iche iche ịtọ nha n'ụzọ ziri ezi.
Ntughari nke nhazi UTM
A na-eji amụma eme ihe iji gosipụta ihe dị n’elu ụgbọelu. N'ebe a kwa, eji ka geometries na axis Cartesian mee. Ojiji ọ bụla nwere ogo nke ogo 6 na e nwere onye meridian dị n'etiti na ogo 3 nke na-ekewa ya na akụkụ abụọ hà ma jiri ya mee ihe maka UTM. Maka izi ezi ka ukwuu, anyị maara na mpaghara ọ bụla kewara site na mbido sitere na Equator. Ihe yiri nke a na-ekewa ya ụzọ abụọ dịka nke amis. Anyị maara na nke anyị mbara ala anyị nwere ugwu ugwu na mpaghara ndịda kewara site na akara akara.
Ebe etiti a na Equator bụ ndị na-eme ka anyụike Cartesian abụọ dị na spindle iji dobe isi n'akụkụ ya dum. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji anya nke uche hụ ihe a niile, anyị ga-ahụ na etiti meridian nke mpaghara ahụ bụ axis X ebe Equator bụ axis Y.Ya mere, axis X ga-enwe mmalite na etiti meridian nke mpaghara ahụ ma nwee uru nke 500000. Uru a na-agbada ka anyị na-aga ọdịda anyanwụ ma na-abawanye mgbe anyị na-aga ọwụwa anyanwụ. N'ụzọ dị otú a, e guzobewo ụkpụrụ ndị a ka ha nwee ike ịnwe ụkpụrụ ziri ezi mgbe niile nke X axis.
Oghere Y sitere na Ecuador mana ọ mere n'ụzọ pụrụ iche. N'adịghị ka akụkụ ọzọ, na ugwu ugwu nke Equator ọ ga-enwe uru 0 na-abawanye n'ebe ugwu ruo mgbe ọ ruru 10000000 uru na North Pole. N'aka nke ọzọ, akụkụ ndịda ndịda ga-enwe uru 10000000 ma ọ ga-eto n'ebe ndịda ruo mgbe ọ ruru uru 0 na osisi ndịda. E setịpụrụ ụkpụrụ ndị a dị ka nke a iji nwee ụkpụrụ Y-axis dị mma.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nhazi UTM na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Nhazi UTM